PaSabata Yakarasika kuMumwe Marudzi - Rabbi Michael Avraham
PaSabata anorasika kumuHedeni
Responsa > Category: Chidzidzo cheTalmudic > PaSabata anorasika kumuHedeni
Isaka Yakabvunzwa makore matatu apfuura
1) Torah yakatisunungura kubva paSabata rakarasika kuenda kumuHedeni…
Izvi zvine chekuita nezvakatsinhirwa neyokupedzisira (Hazo'a nevamwe) kuti mirairo minomwe inosungirwa kunyange nevasiri maJuda zvinhu zvinosungirwa pa'kutendeseka netsika'.
Uye tarira mashoko aMaimonides pamusoro pokusunungurwa kwenzombe yaIsraeri yakarova nzombe yomuHedheni, izvo zvisingadiwi mumutemo wavo…
Gemara mudare reSanihedrini inoti hazvibvumirwi kudzorera kurasikirwa kumuhedheni… Rashi akatsanangura kuti rinozivisa kuti haadzoki nemhaka yomurayiro Wokudzoka, muchinoitika chipi nechipi pane kurambidzwa (kunze kwokunge kwaitwa neimwe nzira nemhaka yokuzvidzisa Mwari kana kuti nokuda kwokutsvenesa zita)…
Mubvunzo wangu ndewekuti mitemo iyi ingashanduka here maererano nekuchinja kuri kuita 'kutendeseka netsika' kunogamuchirwa nevanhu? Mumamiriro ezvinhu apo munhu wese anoona kuti chinhu chakanaka chekuita ndechekudzorera kurasikirwa, mutemo unoshanduka here? Mune dzimwe nyika kune kunyange mitemo (saka zvinokwanisika kumisa mirairo yaKim iyo 'mitemo', uye kana muhedheni akasungirwa isu hatizove vashoma pairi)…
Kunyange kana zvichinzi hapana chisungo, 'chete' itsika dzisiri dzeTorah, hapana chinosungirwa (kunyangwe maererano naRashi)… Torah haisungirwe asi pane chikonzero chekudzoka, mutemo hunhu hunogamuchirwa munguva yedu… Uye kwete nekuda kwemitzvah…
Vamwe vaRabhi vanonyora kuti nhasi zvakafanira kudzoka nekuda kwekutsveneswa kwezita… asi kwandiri zvinoita sekunzvenga, kutsveneswa kwezita hakusungirwe, uye sezviri pachena zvichabvumidzwa chete kana achinge achinyatsoda kutsvenesa zita…
2) Chii chinorehwa nekudzoka 'nekuda kwekutsveneswa kwaGd' (sezvakataurwa munyaya dzemuJerusarema)… Kana Torah isina kungopfura chete asi nekurambidza - chii chakaipa chaizorumbidza vanhu veIzirairi nokuda kwechimwe chinhu kwavari. kurambidza here?
Michi Vashandi Akapindura 6 years ago
Zvechokwadi, ndinobvuma kuti mubvunzo wekutsvenesa zita inyaya isina kunanga. Mukuona kwangu pane chisungo chakakwana chekudzorera nhasi, sekunyora kunoita Hameiri. Iwe unonyora kuti anoita izvi maererano netsika uye kwete nemutemo, uye ini ndichataura pamusoro paizvozvi mukuona kwangu: Kutanga, nokuti nhasi mutemo uye kwete tsika, sezvo zvinosungirwa kudzorera munhu kurasikirwa kumuHedheni sezvakaita muJudha uye kubva mundima imwe chete. The Gemara muBK Lez inotaura zvakajeka kuti vakabvumira mari kuIsrael chete nokuti havana kuchengeta XNUMX mitzvos yavo. Chechipiri, kunyangwe ikabvisa chii chinonetsa nazvo?!
Uye zvawabvunza kana kwaive kurambidza kwatakaona kuti zvinobvumidza kurambidzwa kusvibiswa nekutsveneswa kwezita, ndiye anopa. Uku hakusi kurambidza asi davidzo kumamiriro ezvinhu chaiwo evaHedeni panguva iyoyo, saka kunyangwe munguva yavo pakanga paine mukana wekudzorera kutsveneswa kweZita. Uhwu ndihwo humbowo hwekuti uku hakusi kurambidzwa.
Ona nezve izvi muzvinyorwa zvangu zvevaHedeni munguva yedu pano:
Uye pane maitiro kune vahedheni uye shanduko mu halakhah pano.
Sekureva kwaHameiri zviri pachena kuti inofanirwa kudzorerwa…
Ini ndinobvunza zvinoenderana nevanopokana vasina kutevedzera nzira yake, uye mitemo yevahedheni munguva yedu haifanirwe kufananidzwa nemitemo yemugari anogara ...
Iyo Gemara uye poskim inotaura pachena kuti kunze kwekuregererwa kweTorah pane kurambidzwa panhau iyi (inonzi anobva kuDurban), uye akatobata nekufunga kwake…
Maererano naRashi, pfungwa yacho ndeyokuratidza kuti tinopindura nemhaka yezvatinenge tapomerwa kwete chimwe chinhu.
Asi uyo anoita muzita rehunhu-anoita chaizvo izvo zvaida kudzivirira vachenjeri, anoona kuti anoita chinhu kwete nekuda kwedenga.
Kutanga, hazvidiwi kune nzira yeRashi kana. Zvinokwanisika kuti kurambidzwa kuita nekuda kwemitemo yevahedheni kana kuwana nyasha mumeso avo. Asi kuitira hunhu kwakafanana nekuita kutsveneswa kwaGd. Hunhu hwakaiswawo patiri kubva muTorah (uye makaita zvakanaka nezvakanaka).
Zvisinei, kunyange kana wakarurama kuti pane kurambidzwa kuita kudaro nokuda kwetsika, handinzwisisi kuti unofunga kuti izvi zvinofanira kuchinja sei. Kutanga, kana hunhu nhasi huchireva kupindura saka zvakare uri kuita nekuda kwehunhu uye ndizvo zvinorambidzwa. Chechipiri, mukupfava kwavo, kunyangwe muzuva ravo, kwaive kurongeka kwehunhu, sezvo semaonero ako zvakabva zvarambidzwa kutsiva hunhu.
Asi zvese izvi zvinhu zvisinganzwisisike. Kubva rinhi kuchirambidzwa kuita chimwe chinhu chinopesana nehunhu kungoratidza kuti munhu ari kuita zvinopesana nemutemo? Izvi zvinhu zvinokatyamadza.
Mubvunzo ndewekuti tsika dzetsika dzinogona kuchinja here…
Torah yaingorambidza kuponda nekubira kubva kuvaHedeni nekuti yaionekwa sekururama nehunhu, uye sezvakangoita veMamwe Marudzi ivo vakazvipira chete kukutendeka nehunhu, ndizvo zvatiriwo kwavari. ' kuti takazvipira chete pakati pedu (uye maererano naRashi kunyange inorambidzwa kune vamwe, kuitira kuti tisavanza)
Handinzwisise kuti nhaurirano yacho ndeyei. Ndatotsanangura. Tsika dzinogona kuchinja zvechokwadi. Asi kana mukuona kwenyu Rashi achirambidza kuita zvinhu nokuda kwezvikonzero zvetsika (izvo zvisina mufungo zvakajeka mumurangariro wangu) ipapo hazvizochinji mutemo. Pachava nechisungo chetsika uye kurambidzwa kwe halakhic.
Ruoko. On Kusimuka nekudonha kwaBennett uye Zvazvinoreva (Koramu 486)
Samu Alcomisi On Reference kune iGod mavhidhiyo
Michi On Pindura kunhume yeruzhinji